Andry Rajoelina Manomboka miady amin’ny Frantsay ?
Tanin’i Frantsa eto, mampirehareha antsika ary harenan’i Frantsa, hoy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly tany amin’ny Iles Glorieuses anisan’ireo iray ao anatin’ny Iles Eparses.
Mazava ny resaka fa dia tsy hamotsotra io nosy kely io ka hanome izany an’i Madagasikara i Frantsa, toa maty momoka teo ilay resaka hoe : efa natomboka ny fifampiraharahana. Mifanandrify amin’ity fitsidihan’ny filoha Frantsay aty amin’ny ranomasimbe Indianina ity dia lasa niantsinanana any Rosia ny filoha Malagasy Andry Rajoelina …izy izay tsapa sy hita tamin’ny sary fa tena sahiran-tsaina tokoa noho ireo olana maventy atrehan’ny firenena amin’izao fotoana. "Ici c'est la France, notre fierté, notre richesse", hoy i Emmanuel Macron omaly, izany hoe nambarany fa naman’ny any Frantsa ihany ny ao, reharehany, ary harenany. Tsy arakaraka ny tenin’ny filoha Malagasy ny volana mey tany Frantsa sy ny fanamboaramboaran-dresaka ara-diplomatika nataon’ny Frantsay io tenin’i Macron io.
SOLIKA SY DELESTAZY
Mahita ny zava-misy eny amin’ny toby fivarotan-tsolika ny olona dia lasa velon’ahiahy hoe ary mba manao ahoana ny solika ampiasain’ny Jirama hanodinana ireo milina mpamokatra herinaratra amin’ny ireo « central thermique » maro be manerana ny nosy ? Raha ny fantatra mantsy dia mbola ny famatsian-tsolika mahazatra no iainan’ny jirama amin’izao fotoana satria raha hiroso amin’ilay hoe fanafarana solika mivantana tsy maintsy atao ny tolo-bidy iraisam-pirenena, mandeha ny fisafidianana ny antontan-taratasy, izay vao fantatra ny orinasa nahazo ny tsena, izay vao atao ny kaomandy, izany hoe mety mbola am-bolana fa tsy ho vita ao anatin 2 na 3 herinandro. Ireny niaraha-nahita omaly ireny ny delestazy mahery vaika naharitra ora maromaro. Raha ny tsilian-tsofina re, ankoatr’ilay fihaonana an-tampony eo amin’i Afrika sy Rosia dia hikaroka solika no anisan’ny tena anton-dian’i Andry Rajoelina any Rosia… Efa tena miha ratsy mantsy ny fifandraisan’ny fanjakana amin’ireo kaompania vahiny lehibe misahana ny fanafarana sy ny fanaparitahana ny solika eto Madagasikara, raha araka ny resaka re. Matanjaka izy ireo, akaikin’ny Frantsay mba tsy ilazana hoe tena mahazo avara-patana amin’i Lafrantsa ary tsy hanaiky mora foana ny ho very tombontsoa. Ny olon-tsotra sy ny mpanjifa moa tsy dia miditra amin’ny asa marika lava be sy ny ambadika politika fa famatsiana solika araka ny tokony ho izy mba hahafahana miasa sy mivezivezy no ilainy dia izay ihany. Tena saro-pady ny solika sy ny angovo (jirama) kanefa ireo zavatra roa ireo mihitsy izao no tojo olana goavana ankehitriny.Fantatra fa mikaroka vahaolana ny mpitondra fanjakana, fa mandra-piandry izany dia ahoana ny fandehany ? Hilahatra solika sy hitanitanina andro aman’alina eto ve ?
Mahatsapa ny mpandinika politika sy fiarahamonina fa maro ny zavatra tsy voafehin’ny fanjakana intsony ankehitriny toy ny vidim-piainana, fandriampahalemana, fitoniana politika,... Ho avy koa anefa ny fandinihana ny tetibolam-panjakana 2020, ary hifarana afaka 2 volana sy tapany ny taona 2019. Miditra volana janoary sy febroary dia efa tonga indray ny maitso ahitra ary ho mafimafy ny vidim-piainana. Midika izany fa tena ho sahirana izao fitondrana Mapar IRD izao raha tsy mahita vahaolana ao anatin’ny 2 volana. Ho hita any amin’ity dia any Rosia ity ve izany ary inona no mety ho takalony ? Sa tsy maintsy hilefitra indray ny fitondram-panjakana ka hiverina hiresaka an-databatra indray amin’ireo kaompanian-tsolika lehibe eto an-toerana izay hita ho efa manomboka manenjana ankehitriny ?